Ny fanofana bisikileta ao Thailand ~ Journey-Assist - Inona no tadiavina
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Mampiavaka ny fitsipiky ny fifamoivoizana any Thailand » Ny fanofana bisikileta ao Thailand
9 Aogositra, 2019
Aiza no hanofa bisikileta iray ao Thailand
Kitapo mandeha ho azy na manual
Modely amin'ny bisikileta bisikileta malaza any Thailand
Vidin'ny fanofaanana bisikileta Thailand
Fiantohana bisikileta sy fiantohana ara-pahasalamana
Inona no tadiavina rehefa mandinika bisikileta iray
manao izay hampisy
Inona no tokony hatao raha simba ny bisikileta
Miverena bisikileta manofa
Tsy sarotra ny mitady toerana manofa bisikileta any Thailandy - andeha fotsiny eny an-dalambe amin'ny tanàna rehetra. Ireo teboka manofa dia hita mazava amin'ny teny hoe "Motobike for rent" ary "Motobike for rent".
Ny solontenan'ny teboka toy izany dia vonona ny hampiseho ny zava-drehetra ary hamaly ny fanontanianao rehetra raha tsy mahalala na inona na inona momba ny bisikileta ianao. Ny tompon-trano dia mety ho tompona tsy miankina sy orinasa iray.
Misy tolotra isan-karazany ho an'ny fanofana bisikileta an-tserasera any Thailand. Fa tsy ity no tsara indrindra, angamba fomba tsara hanakarenan'ny bisikileta. Na izany aza, manoro hevitra mafy izahay haka ireo izay hitanao sy hojerenao manokana. izany hoe efa tany Thailandy. Matetika, miaraka amin'izany fotoana izany, afaka manaiky ny vidiny ambany ianao.
Raha mitondra bisikileta ara-dalàna dia tsy maintsy manana zo mitondra fiara ianao (sokajy A). Matetika ny vahiny any Thailand no tsy miraharaha an'io zava-misy io, satria ny polisy dia tsy mandinika na aiza na aiza. Na dia mianjera amin'ny taratasim-bola iray aza ianao, ny onitra iray mitaingina bisikileta tsy misy fahazoan-dàlana dia omena vola kely - hatramin'ny 500 ka hatramin'ny 1000 baht. Azonao atao ny manazava ao amin'ny tanàna iray manokana izay misy "round-up" fotsiny.
Polisy misahana ny fifamoivoizana any Thailand
Ny zo dia tsy maintsy amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Raha mikasa ny handeha any Thailand ianao mandritra ny fotoana maharitra, ary tsy manana sokajy mpamily A, dia afaka maka fanadinana momba ny zo toy izany mivantana any Thailand ianao.
Thailand SDA PDF (anglisy) tlaw0140_5
Famaritana ny mari-dalan'i Thailand
Fankatoavana manofa bisikileta any Thailand
Raha tahirim-bola, azonao atao ny mangataka ny pasipaoro samirery, na dika mitovy aminy, na vola. Ny fialana pasipaoro dia tsy ampiasaina. Betsaka ny fanofana bisikileta eto amin'ity firenena ity, ka mora ny mahita iray tsy mitaky pasipaoro. Azonao atao ihany koa ny manolotra tahirim-bola fiarovana fa tsy pasipaoro iray, izay mahatratra an'arivony ny baht.
Tsara kokoa ny miala fotsiny vola fa tsy pasipaoro. Na dia te hisambotra pasipaoro aza ny solontenan'ireo biraon'ny fanofa trano, satria mamela azy ireo hametaka ny mpanjifa izy ireo, mangataka, ohatra, ny tambin-tsakafo lehibe amin'ny takalona kely.
Matetika, indrindra amin'ny toerana fizahan-tany, dia afaka manofa bisikileta amin'ny hotely izay mipetraka ianao. Amin'ny tranga toy izany, matetika izy ireo dia tsy mandray antoka mihitsy.
Heloka no ilaina!
Mandeha bisikileta tsy misy fiarovan-doha any Thailandy dia sazin'ny onitra 500 baht. Amin'ny faritra maro dia mety hiova ny loza mety hianjera amin'ny fanamarinana. Ireo satroka dia amboarina amin'ny toerana hofan-trano, na izany aza, raha ny fitsipika, ireo fiarovan-doha ireto dia manana fitaratra miloko, na tsy misy fitaratra akory, ary amin'ny ankapobeny, ny kalitaon'ireo satroka ireo dia mampahatahotra. Noho izany, na tokony haka solomaso ianao miaraka amin'ny dia, na hividy satroka kalitao ara-dalàna.
Tsy dia lafo loatra, ka azo ekena ny fahazoana tombony toy izany rehefa mikasa ny hitety be dia be. Raha tsy izany dia mila mi-flink foana ianao noho ny vovoka manidina eo imasonao. Rehefa mividy fiarovan-doha dia tsy mendrika hotehirizina. Aleo mividy lafo vidy noho ny 200 baht, satria ny fiarovan-doha mora vidy dia marefo.
Ho an'ireo izay mbola kely ny traikefa an-tsehatra, ny fifindrana mandeha ho azy dia ho safidy mora kokoa sy mora kokoa. Mora kokoa ny fitantanana bisikileta toy izany. Ny mora kokoa dia ny mianatra ny manisy bisikileta amin'ny ankapobeny. Na izany aza, na dia lehibe aza, ny bisikileta fandefasana manual dia tsy misy tombony azo antoka, afa-tsy ny toekarena kely fotsiny ary ny fiakarana mora kokoa. Saingy, ny bisikileta vaovao misy fifindrana mandeha ho azy, na dia amin'ireto lafiny ireto aza, dia tsy ambany noho ny bisikileta miaraka amin'ny fandefasana manual.
Tian'i bisikileta malaza indrindra ao Thailand
Ireo dia azo antsoina hoe môtô Honda: PCX, Click, Airblade ary Scoopy, ary koa ny bisikileta Yamaha: Mio sy Nouva. Yamaha Nouva sy Honda Airblade dia modely mavesatra, nandritra ny fotoana ela dia izy ireo no mahery indrindra tamin'ny bisikileta rehetra nitondra fifindrana mandeha ho azy. Natsangana ny Click 125 vaovao taty aoriana.Manampy izany, ny Yamaha Mio dia lasa matanjaka ihany koa taorian'ny fanavaozana farany indrindra. Na izany aza dia azo antsoina hoe lany andro ny Honda Airblade.
Ny saina manokana dia mendrika ny modely Honda PCX, izay tian'ny mpizahatany maro avy amin'ny USSR teo aloha. Misy habean'ny tanky misy 125 ka hatramin'ny 150 metatra toratelo. cm ary lehibe be. Amin'ireo maodely bisikileta rehetra dia manana fampiononana lehibe indrindra izy, fa ny hofan-trano kosa dia 1,5-2 avo kokoa noho ny ambiny. Ho an'ny fanombohana, tsy asiana io bisikileta io satria sarotra ny mitazona satria ny lanjany mavesatra. Ny vidin'ny fanarenana raha misy ny fahavoazana dia ho avo kokoa ihany koa.
Ny vidiny mahazatra dia 3 ka hatramin'ny 000 baht isam-bolana amin'ny bisikileta misy fandefasana azy mandeha ho azy. Raha misafidy ny tsy isam-bolana ianao, fa hofan-trano isan'andro, ny vidiny 4 ka hatramin'ny 000 baht isan'andro. Ny bisikileta misy fandefasana manual dia mora vidy, afaka mahita 200 baht isan'andro sy 300 100 isam-bolana ihany ianao. Mety ho mafy sy be bisikileta be toa ny Honda PCX mety ho 2 ka hatramin'ny 000 baht isam-bolana. Miovaova ny vidin'ny faritra isan-karazany any Thailand. Any amin'ny faritra atsimon'ny firenena dia avo kokoa izy ireo, any avaratra - ambany kokoa. Ny toerana manofa sasany dia manolotra fihenam-bidy mandritra ny 5 andro farafahakeliny.
Ny toerana sasany manofa trano dia manome fiantohana bisikileta (manohitra ny fahasimbana sy ny halatra). Mandritra izany fotoana izany dia miakatra ny vidin'ny fanofa. Ohatra, bisikileta mitentina 200 baht isan’andro tsy misy fiantohana dia mandany 300 baht isan’andro miaraka fiantohana. Tsara izany ho an'ireo tsy manana traikefa amin'ny fitateram-bahoaka. Rehefa dinihina tokoa, ohatra, ny fanoloana ny fitaratra amin'ny bisikileta iray dia mitentina 150-300 baht, amin'ity lafiny ity no azo antoka fa mahasoa.
Ny fiantohana ara-pitsaboana dia tsy manolotra finday. Tokony hanao izany izy alohan'ny handehanany any Thailand. Ilaina ny manampy ny fonosana "fialan-tsasatra tafahoatra" na "Active Rest", satria ny fandehanana bisikileta dia mihoatra ny faritry ny fitsaharana mahazatra, ka ny fonosana fiarovana mahazatra tsy manarona azy. Aza adino fotsiny ny mitondra fiara ary mizaha zon'ny sokajy A, raha tsy izany dia holavina ny fiantohana raha misy lozam-pifamoivoizana.
Raha sendra ny fianjerana izay niteraka fahavoazana kely fotsiny, dia tsy afaka mitady fanampiana ara-pitsaboana matihanina ianao. Na izany aza, rehefa mitantana dia azo atao tsara ny manantena fa hanasa tsara ny ratra ianao ary hanao bandage.
Fahavoazana. Mila mandinika tsara ny bisikileta ianao, fakàna sary na azonao alaina daholo aza ny dents sy ny scratches. Izany dia hisoroka ny kely indrindra tsy hisoloky raha miverina amin'ny bisikileta. Rehefa dinihina tokoa, matetika ny birao fanofa dia manandrana mampisy fahasimbana tsy ilaina amin'ny mpanjifa.
Tires. Ny anjara toerana lehibe dia tantanan'ny fanjakana ny motera.
Ny vatanany. Raha mila mitondra zavatra hafa ianao, dia tokony misafidy bisikileta misy antontan-tarika manana fahaiza-manao ampy.
Gearbox. Ny vidin'ny manofa bisikileta miaraka amin'ny fandefasana otomana sy ny fandefasana manual dia somary hafa kely ihany. Amin'ny ankapobeny, ny modely misy ny fifindrana mandeha ho azy dia mora kokoa. Ny tombony kely fotsiny amin'ny fampitana ny manual dia ny famonjena kely amin'ny solika.
Mileage. Tsy azo ihodivirana ny mandeha bisikileta iray kilaometatra ambony (10 000 km). Zara raha sahirana ny tompon-trano amin'ny fanoloana ireo faritra efa vita sy fanaraha-maso tsy tapaka.
Power. I Thailand dia azo antsoina hoe firenena be tendrombohitra, noho izany dia tsara kokoa ny misafidy bisikileta matanjaka mba hanamorana ny hihanihana.
Drive drive. Tokony hanao fihazakazahana fitsapana ianao, hijery ireo brakes, rafitra elektrika, hihaino ny môtô ary handinika ilay dinamika.
Fifanarahana niofana. Mazava ho azy fa tokony hamaky tamim-pitandremana ny fifanekena ianao alohan'ny sonia azy.
Famoronana bisikileta iray ao Thailand
Ny fiara mifono refuel dia matetika mahalala tsara hoe iza no lasantsy ao anaty bisikileta, ary ny tanky entona dia saika milaza foana hoe iza no ilaina ny lasantsy. Any amin'ny seza (indrindra ny ankamaroan'ireo) na eo amin'ny seza sy ny kodiarana ilay mpanamory tank. Ny vidin'ny solika dia 30 baht isaky ny litatra. Betsaka ny tobin-tsolika eto amin'ny firenena, na dia misy faritra sasany aza, tsy dia feno firy amin'izy ireo. Indraindray koa ny mpivarotra dia entona mandrehitra lasantsy. Amin`ity tranga ity, dia somary lafo vidy kokoa, fa ity safidy ity dia tena mora izay lavitra ny refueling.
Ny fanofana bisikileta dia mitaky ny vidin'ny solika ihany koa. Tsy misy menaka any Thailand, noho izany dia tsy azo antenaina ny vidin'ny fanomezana. Ho fanampin'ny tobin-tsolika, ireo mpividy trano tsy miankina izay efa voalaza etsy ambony dia manolotra lasantsy, izay manana loko miloko karbonika: afaka mavo, mena na maitso. Ary azony amidy manaraka ny voankazo.
Ny teboka manofa dia mahalana mamoaka bisikileta iray miaraka amina siny feno 100%. Matetika indrindra fa ny lasantsy ao dia tsy ampy ny tonga ao amin'ny tobin'ny gazy. Ilaina ny hamerina ny bisikileta amin'ny toe-javatra mitovitovy - miaraka amin'ny alikaola kely ao anaty tanky. Raha omena alika feno rano ianao dia tokony averinao ihany koa ny 100%, raha tsy izany, ho setrinao, dia mety mitaky habetsaky ny tsy ampy hoentina ianao.
Raha ny fahasimbana dia kosmetika tanteraka amin'ny natiora, ny singa mekanika dia tsy voakasika, ary manana fiantohana amin'ny bisikileta ianao dia tsy hatahotra mihitsy. Rehefa mandefa ny bisikileta, ny kely indrindra amin'ity tranga ity dia hamoaka invoice ho an'ny orinasam-piantohana. Raha matotra ny lozam-pifamoivoizana ary simba ny fampandehanana bisikileta dia ilaina ny hanolorany azy amin'ny tompony ary hanolo azy vaovao. Raha tsy misy fiantohana dia tokony hiantso avy hatrany amin'ny serivisy serivisy ianao ary hanao fisafoana mba hamaritana ny tena fototry ny fahasimbana sy ny vidin'ny fanamboarana. Ilaina ny fifaranan'ny tompona fahatelo raha tsy izany dia mety mitaky vola be loatra amin'ny fanamboarana ny tompon-trano.
Tsara kokoa ny miverina amin'ny bisikileta 2 andro mialoha kokoa amin'ny faran'ny vanim-potoanan'ny fanofana. Raha tsy maintsy misidina fiaramanidina rahampitso ianao, nefa misy olana tsy ampoizina mandritra ny fiverenan'ny bisikileta, vao afaka alina ianao teo amin'ny seranam-piaramanidina. Raha toa ka nanimba ilay bisikileta ianao dia tokony handoa vola maromaro. Raha mikasa ny hanimba ny faharatsiana izay tsy tena meloka aminao ianao dia tokony hampiseho ny kely kokoa ny sarinao sy / na horonantsary azonao rehefa mandinika ilay bisikileta alohan'ny hampanofaanao azy. Tsy ny zava-misy fa ity no hanampy ary raha tsy naharesy lahatra azy izy dia tokony hanantena hiantso ny polisy mpizahatany ianao. Matetika ny polisy amin'ity firafitra ity dia tsy mivadika amin'ireo mpizahatany. Fa amin'ny ankapobeny, dia tsy fahita ny andrana hosoka amin'ny tompon-trano. Indraindray ny toe-javatra amin'ny bisikileta dia tsy voamarina mihitsy rehefa miverina.